चिसो मौसमसँगै हुने टन्सिल के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
चिसो मौसमसँगै हुने टन्सिल के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ?
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : २६ मंसिर २०७८ १३:१४
यी दुई ग्रन्थीहरुले शरीरको रोगप्रतिरोधक क्षमता बढाउँछ तर कहिलेकाँही आफै संक्रमण हुन्छ । यस्तो अवस्थामा घाँटी फुलेर रातो हुन्छ । मौसम परिवर्तनका समयमा हाम्रो शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुँदा बढी सताउने गर्छ ।
टन्सिल ब्याक्टेरियाले गर्दा हो कि भाइरसले भन्ने छुट्टयाउनु पर्छ । यदि भाइरसका कारणले हो भने घाँटी दुख्ने, ज्वरो आउने र रुघाखोकी लाग्ने हुन्छ । त्यसलाई कम गर्न चिकित्सकको सल्लाह अनुसार एन्टिबायोटिक खाएको ४ देखि ५ दिनमा निको हुन्छ । तर व्याक्टेरियाको संक्रमणले गर्दा घाँटी दुख्ने ग्रन्थी बढ्ने, ज्वरो आउने, पाक्ने तथा पिप जम्ने र शरीर दुख्ने तथा गिर्खा आउने जस्ता समस्या हुन्छ । व्याक्टेरियाले टन्सिल सुनिने वा गिर्खा बढ्ने हुन्छ । यस्तो समस्या आएमा चिकित्सकको सल्लाह बमोजिममात्र एन्टिबायोटिक सेवन गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन रोगका बिरामीलाई पनि टन्सिल बढ्ने समस्या हुन्छ ।
घाँटी दुखेको वा खानेकुरा निल्न गाह्रो भएको महसुस हुनेबित्तिकै नियमित नुन पानीले कुल्ला गर्नुपर्छ । टन्सिलको समस्या भएमा चिसो तथा काँचो खानेकुरा खानु हुँदैन । चिसो र तातो सँगसँगै पनि खानु हुँदैन ।
मुखको स्याहार, सरसफाइ र कुल्ला गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । टन्सिल ७० प्रतिशत रुघाखोकीले हुन्छ । हरियो सागपात खाने, झोलिलो खानेकुरा खाने, प्रशस्त पानी खाने तथा ५ देखि ७ दिनसम्म औषधी खानुपर्छ । एक वर्षमा धेरै पटक टन्सिलले सतायो भन्ने व्याक्टेरियाले भएको हुन्छ । जुन हाम्रो ग्रन्थीमा पिप जमेर निको नहुने हुन्छ । यस्तो समस्या आउनेबित्तिकै चिकित्सकसँगको परामर्शमा उपचारमा लाग्नु जरुरी हुन्छ । लामो समयसम्म टन्सिल निको भएन भने त्यसले मुटुलाई असर गर्छ ।
घाँटी दुख्ने र निल्न गाह्रो हुने
सागसब्जी प्रशस्त खाने
तातो झोलयुक्त खानेकुरा प्रशस्त खाने
मनतातो पानीले कुल्ला गर्ने
न्यानो कपडाले घाँटीलाई ढाक्ने
घर बाहिर निस्कदा नियमित माक्सको प्रयोग गर्ने
चिसो र फ्रिजमा राखेका खानेकुराका नखाने
चिल्लोयुक्त खानेकुरा नखाने ।